အထည်အလိပ်စမ်းသပ်ခြင်းတူရိယာစက်ရုံ - China Textile Testing Instrument ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ
DRK908F ချည်မျှင်အညီအမျှ အကဲဖြတ်ခြင်း ပလပ်ဖောင်း (Blackboard နည်းလမ်း)
DRK908F ချည်မျှင်အညီအမျှ အကဲဖြတ်ခြင်း ပလပ်ဖောင်း (Blackboard Method) သည် ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ရှိ ချည်မျှင်၏ ညီညာမှုနှင့် အသွင်အပြင် အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကဲဖြတ်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ကျောက်သင်ပုန်းရှိ ချည်မျှင်၏ အသွင်အပြင်အရည်အသွေးနှင့် စံနမူနာပြအရည်အသွေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ရှိ ချည်မျှင်၏ အသွင်အပြင် အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ရန်။
DRK908H ချည်မျှင်ပင် အလင်းအရင်းအမြစ်သေတ္တာ (ကျောက်သင်ပုန်းနည်းလမ်း)
DRK908H ချည်မျှင်အညီအမျှအလင်းရင်းမြစ်သေတ္တာ (ဘလက်ဘုတ်နည်းလမ်း) ကို ချည်မျှင်၏ညီညာမှုနှင့် စုစုပေါင်း neps အရေအတွက်ကို အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်- GB/T9996.2 နှင့် အခြားစံနှုန်းများ။အင်္ဂါရပ်များ- 1. နမူနာဇယားကို တင်သွင်းသည့် အထူးပရိုဖိုင်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ ပစ္စည်းသည် ပေါ့ပါးပြီး မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့သည်။2. တူရိယာအတွင်းရှိ ရောင်ပြန်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။3. တပ်ဆင်ရန်နှင့်အစားထိုးရန်လွယ်ကူသောမီးခွက်;နည်းပညာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ- 1. အလင်းအရင်းအမြစ်- အဖြူရောင်ချောင်းပြွန်၊...
DRK908J ချည်မျှင်ပင် အလင်းအရင်းအမြစ်သေတ္တာ (ကျောက်သင်ပုန်းနည်းလမ်း)
DRK908J ချည်မျှင်ကို အလင်းရင်းမြစ်ဘောက်စ် (Black board နည်းလမ်း) ကို ချည်အနက်ရောင်ဘုတ်ပြား၏ ညီညာမှုနှင့် neps စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။
DRK835B Fabric Surface Friction Coefficient Tester (B method)
DRK835B အထည်မျက်နှာပြင် ပွတ်တိုက်မှုကိန်းဂဏန်းစမ်းသပ်ကိရိယာ (B နည်းလမ်း) သည် အထည်မျက်နှာပြင်၏ ပွတ်တိုက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
DRK835A Fabric Surface Friction Coefficient Tester (နည်းလမ်း)
DRK835A အထည်မျက်နှာပြင် ပွတ်တိုက်မှုကိန်းဂဏန်းစမ်းသပ်ကိရိယာ (နည်းလမ်း A) သည် အထည်မျက်နှာပြင်၏ ပွတ်တိုက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
ချည်သား၊ polyester၊ ချောမွတ်သော၊ acrylic၊ ပိတ်ချော၊ ကတ္တီပါ၊ သိုးမွှေးစသည်ဖြင့် သန့်စင်သော သို့မဟုတ် ရောစပ်ထားသော ချည်မျှင်၊ ဝင်ရိုး၊ အထည်၊ သားရေစသည်တို့၏ အစိုဓာတ် (အစိုဓာတ်ပြန်လည်ရရှိခြင်း) ကို တိုင်းတာရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်စကင်န်ဖတ်ခြင်းသည် 50 မီလီမီတာအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ တိုင်းတာထားသော အရာဝတ္ထု၏ အစိုဓာတ်ကို တိုင်းတာသည်။